ओलीको ओरालो लाग्दो सत्तायात्रा - नेपालबहस
ओलीको ओरालो लाग्दो सत्तायात्रा
| १४:२७:०५ मा प्रकाशित
२५ जेठ, काठमाडौं । लामो समय सत्ताको रगजगमा मग्न नेकपा एमालेको केपी ओली समूहको हालत विस्तारै ओरालो लाग्न थालेको छ । यसको पछिल्लो श्रृँखला देखियो–सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेक्रममा एमालेकै माधव नेपाल पक्षको साथ र समर्थनले ओली पक्षलाई चार चित ख्वाइदिएका छन् ।
एमालेले मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत नदिने निर्देशन दिएपनि नेपाल पक्षको बहुमत रहेको संसदीय दलले समर्थन गर्ने निर्णय ग¥यो ।सोही बमोजिम भएको मतदानमा एमालेकै १७ जनासहित ३० मत पाए । उनको विपक्षमा ९ मत प¥यो । एमालेको ओली पक्ष र जनता समाजवादीको २ मत विपक्षमा परेको थियो ।
प्रदेशसभामा ५१ सदस्य रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले भने मतदानमा भाग लिएन । यद्यपि सरकार ढल्ने अवस्था आएको थियो भने कांग्रेसले पनि पक्षमै मतदान गर्नेवाला थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले ओली पक्षलाई अर्काे झड्का मिल्यो । किनभने अब प्रतिपक्षीको भूमिका पनि कांग्रेसले प्राप्त गरेको छ । ओली पक्षले त्यो भूमिकासमेत पाएन ।
यसअघि पनि एमालेकै माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरिदिंदा कर्णाली प्रदेश सरकारसमेत जोगिएको थियो । ओलीले एकलौटी गर्न थालेपछि नेपाल पक्षले प्रतिरोध गर्न यस्तो रणनीति अपनाएका हुन् । यो परिवेश संघीय सरकारमा समेत देखिएको छ ।
नेपाल पक्षका २३ जना सांसदले ओलीविरुद्ध हस्ताक्षर गरी प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको अवस्था छ । सो उपर सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिने ३३ मिनेट पहिले
के भएको हो झलनाथलाई ? ७ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिको खोप कुटनीति निश्प्रभावी, धेरै राष्ट्रले पत्रको जवाफ समेत फर्काएनन् ८ मिनेट पहिले
स्याङ्जाको दभुङठाँटीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु १८ मिनेट पहिले
मेलम्ची क्षेत्रमा उद्धारका लागि अखिल र युवा संघको टोली परिचालन २० मिनेट पहिले
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि सहज बन्दै बाँकेको जनजीवन ३० मिनेट पहिले
कुमारी बैंकको शेयरमा खरिद माग उच्च, शेयरमूल्य कति ? ४० मिनेट पहिले
उपचारको आशमा पूर्वलडाकु परियार ४६ मिनेट पहिले
पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अबरुद्ध ५० मिनेट पहिले
नबिल बैंकको बैकिङ सेवा ४ देखि ७ गतेसम्म बन्द हुने ५२ मिनेट पहिले
गोली प्रहार गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ ५ दिन पहिले
वाग्मती प्रदेशको बजेट असार १ गते सार्वजनिक हुने ३ दिन पहिले
चुरे उत्खनन गरी गिट्टी बालुवा निर्यात निर्णयप्रति राजनीतिक दलले गरे चर्को विरोध २ हप्ता पहिले
कोरोना संक्रमित महिलाको शल्यक्रियाबाट सुत्केरी २ हप्ता पहिले
वर्षाअघि नै बन्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने ४ हप्ता पहिले
सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानमा ६ रिट पेश ४ हप्ता पहिले
गाँजा कारोबार गर्ने तीन जना प्रक्राउ १ हप्ता पहिले
आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १९ रिटमा सुनुवाई हुँदै ३ हप्ता पहिले
तलेजुस्थानबाट गाईजात्रा शुरु २ वर्ष पहिले
उपत्यकामा शनिबार थप २ सय १६ जना संक्रमित थपिए १० महिना पहिले
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई बिना धितो ऋण १ वर्ष पहिले
माथिल्लो तामाकोशी : पहिलो पटक डोरी छिन्यो, दोस्रो पटक काम फत्ते २ वर्ष पहिले